> Resource> Naghachi> Tutorial nke Mac Mkpofu ehichapụ Foto dị Iweghachite
Olee otú iji weghachite ehichapụ Photos si Mac ahịhịa?
M ehichapụ ụfọdụ na-abaghị uru foto site na m Mac desktọọpụ, na mgbe ahụ m sụrụ ahịhịa. Mgbe m enyocha m desktọọpụ ọzọ, m chọpụtara na ọtụtụ ndị bara uru oyiyi anọwo na-ehichapụ kwa. Na m chọrọ ịmara bụ n'ebe ọ bụla ga-ekwe omume ka m photos azụ?
Azịza ya bụ nnọọ ee. Ọbụna ma ọ bụrụ na photos e sitụbeghị Mac ahịhịa, ị ka nwere ike weghachi ha. Nke a bụ n'ihi na ehichapụ foto ka na-adị na gị Mac ike mbanye, ezie na ị nwere ike ịnweta ha. Ya mere, i kwesịrị ime ihe ngwa ngwa iji chọta a Mac ahịhịa ehichapụ foto mgbake omume iji weghachite foto gị.
Na Wondershare Data Recovery for Mac, ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe banyere nke a foto ọnwụ nke. Nke a ọma e Mac ahịhịa ehichapụ foto mgbake omume bụ ike iji weghachite a nnukwu ego nke image ụdị, gụnyere jpg, TIFF (TIF), PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, wdg
Download ikpe mbipute ugbu a. N'ọnwụnwa a version-enyere gị aka iṅomi gị Mac nkebi furu efu photos, na hụrụ photos dị maka preview tupu i kpebie na-agbake ha.
Igosi ehichapụ Foto dị Iweghachite Mac ahịhịa na 3 Nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ naghachi ehichapụ Photos si Mac Mkpofu
Dị ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru, ị bụ banyere agụ ntụziaka nlezianya na họrọ a mgbake mode na mmalite interface na-amalite mgbake.
Naghachi ehichapụ foto ndị si Mac ahịhịa, biko họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode.
Nzọụkwụ 2 iṅomi Mac Mkpofu anya n'ihi na Lost Photos
The ngwá ọrụ ga-egosipụta niile partitions ma ọ bụ mpịakọta na gị Mac, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu na gị Mac ahịhịa locates na na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu. I nwekwara ike họrọ nkebi ebe gị furu efu photos furu si ka iṅomi kwa.
Iji weghachite photos, biko họrọ "Image" mgbe na ịpị "Họrọ File Ụdị" ke window.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake ehichapụ Pictures si Mac Mkpofu
The hụrụ foto na scanned nkebi niile ga na-egosipụta na nchekwa. Ebe i nwere ike pịa "Mkpofu" nchekwa ka ịhụchalụ na ego photos mkpa ka ị gbakee.
Ahụ, biko họrọ photos gị mkpa ma pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha azụ gị Mac.
Cheta na: Ọ dị mma iji weghachi recoverable foto ọzọ nkebi na gị Mac zere photos si na-overwritten.